Fantaro ny fika hamadihana ny sakafo rehetra ho fandoroana tavy | Bezzia
Tony Torres | 11/01/2022 20:00 | Vatsim-pivelomana, sakafo
Mba hampihenana lanja dia ilaina ny manampy ny caloric deficit, miaraka amin`ny fandoroana ny kaloria. Ny iray tsy misy ny iray dia tsinontsinona, satria ny fahaverezan'ny lanja amin'ny fomba voafaritra sy ara-pahasalamana dia mandalo amin'ny fitambaran'izy roa. Toy izany koa ankehitriny ny fihinanana sakafo dia tsy midika hoe mosarena, ny fanaovana fanatanjahan-tena dia tsy midika hoe mamono tena mba hiofana mandritra ny ora tsy misy farany isan’andro.
Ny tokony ho fantatrao dia ny fampiofanana mahomby dia manampy anao handoro tavy sy hampihenana ny lanjany. Ankoatra ny fampidirana sakafo sasany amin'ny sakafonao, dia ahafahanao mamadika ny sakafo rehetra ho fandoroana tavy. Satria misy ny sakafo izay misy fiantraikany amin'ny vatana sy amin'ireo no hotompoinay mba hanatratrarana ny tanjonay hampihenana lanja. Te-hahafantatra hoe iza avy ireo mpiara-dia hanampy anao hahatratra ny tanjonao?
1 Ahoana ny fomba hamadihana ny sakafo rehetra ho fandoroana tavy
1.1 Ampio ny fakan'ny ginger amin'ny sakafonao
1.2 Salady misy vinaingitra
1.3 Ampio prawn amin'ny fomba fanamboarana paty
1.4 Asio zava-manitra mandoro matavy ny sakafonao
Ahoana ny fomba hamadihana ny sakafo rehetra ho fandoroana tavy
Ny sakafo sasany dia misy akora izay mamorona fiantraikany thermogenic ao amin'ny vatana, izay ahafahanao mandoro tavy, indrindra amin'ny faritry ny kibo. Ny akora hafa koa dia manampy anao hampihena lanja, toy ny ireo izay manafaingana ny metabolism, ohatra. Ireo akora ireo dia hita ho azy amin'ny sakafo. Izany hoe, raha ampidirinao ao anaty sakafo tsy tapaka izy ireo, dia azonao atao ny manova ny sakafo rehetra ho fandoroana tavy.
Ampio ny fakan'ny ginger amin'ny sakafonao
Ny fototr'i sakamalaho Mahery vaika tokoa izy io, satria noho ny fananany maro dia tena mahasoa ho an'ny fahasalamana. ity no iray amin'ireo sakafo misy fiantraikany thermogenic eo amin`ny vatana, izay midika fa raha ampiana ginger amin'ny sakafonao ianao dia handoro tavy haingana kokoa sy mahomby kokoa. Ny ginger dia miasa mitovy amin'ny sakafo hafa toy ny sakay, izay mampitombo ny hafanan'ny vatanao ary mandoro tavy.
Ampio ny ginger amin'ny purees sy crème anananao, ary manana safidy maro ianao sakafo hariva ara-pahasalamana izay ahafahanao manala tavy ihany koa tsy tonga saina akory. Azonao atao koa ny manampy akora hafa ary mampitombo ny vokany, toy ny turmeric na sakay kely, raha tianao ny masiaka.
Salady misy vinaingitra
Ny vinaingitra ihany koa dia manana fiantraikany mahery vaika amin'ny fandoroana tavy ary noho izany dia tena tsara ho an'ireo rehetra mila lanja. Io akora mahery vaika io mampihena ny tavy, mba hahafahanao manala azy mora kokoa. Makà salady miaraka amin'ny vinaingitra akanjo isan'andro, azonao atao ny mifandimby ny salady maitso amin'ny hafa mifototra amin'ny legume. Hanana sakafo feno navadika ho fandoroana tavy ianao.
Ampio prawn amin'ny fomba fanamboarana paty
Ny makamba, miaraka amin'ny sakay kely, dia fandoroana tavy mahery vaika ho an'ny zavokà rehetra, ary matsiro koa izy ireo. Izany dia satria proteinina patsabe miaraka amin'ny fiantraikany thermogenic amin'ny sakay, mamorona vokatra fandoroana tavy mahery vaika. Raha ampiana voasarimakirana ihany koa ianao dia hanatsara ny fiasan'ny atiny.
Asio zava-manitra mandoro matavy ny sakafonao
Ny zava-manitra maro dia manana fiantraikany thermogenic, izany hoe mampitombo ny hafanan'ny vatana ary manampy amin'ny fandoroana tavy eo an-toerana. Ankoatra izany, ny zava-manitra dia mamela anao hankafy lovia miaraka amin'ny tsiro bebe kokoa tsy misy kaloria, mampihena ny fihinanana sodium. Ny sasany amin'ireo zava-manitra mahafinaritra indrindra amin'io lafiny io dia curry, voantsinapy, turmeric, na cayenne.
Ny fianarana manambatra ny sakafo dia ny fanalahidin'ny fahafahana mihinana ny zava-drehetra amin'ny fomba ara-pahasalamana, raha mbola afaka mampihena lanja ianao. Satria tsy momba ny hanoanana, fa momba ny fianarana mihinana, ny mamahana ny tenanao amin'ny otrikaina ilaina mba hahafahan’ny vatana miasa tsara. Ankafizo ny sakafo, ny tsirony ary ny hanim-py avy amin'ny tany, satria ny sakafo manankarena indrindra dia ny voajanahary indrindra.
Miaraka amin'ireo tetika ireo mba hamadihana ny lovia ho fandoroana tavy, dia mety hihena mora kokoa ianao. Manaova fanatanjahan-tena tsy tapaka mba hampiroboroboana ny fatiantoka matavy sy ny sisa. ianao dia hanatsara ny tombotsoan'ireo mpiara-miombon'antoka fandoroana matavy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » Vatsim-pivelomana » Fantaro ny fika hamadihana ny sakafo rehetra ho fandoroana tavy